/Blog/Gallery/Rao Isotretinoin (Accutane) ho an'ny akne: Fikarakarana ny akne miaraka amin'ny Isotretinoina
Posted on 02 / 01 / 2019 by Dr. Patrick Young nanoratra tao Gallery.
Ny Isotretinoin dia fitsaboana amin'ny fomba mahomby indrindra. Eto dia ho hitanao ny fanadihadiana isotretinoin, ampiasain'ny isotretinoin, ny fiantraikan'ny isotretinoin sy ny fampahalalana hafa momba ny fanafody, ka ao anatin'izany ny dosage sy ny fepetra fisorohana.
Inona ny Isotretinoin (Accutane)?
Mitadiava raw isotretinoin (Isotretinoin 4759-48-2)? Eny, raha sendra tsy fantatrao ianao, dia misy zava-mahadomelina mahazatra mifandray amin'ny rongony i Isotretinoin. Amin'ny fampiasana isotretinoin, ny fanafody dia ampiasaina amin'ny fitsaboana sy ny fisorohana ny fihenam-bidy, ny fihenam-bidy amin'ny aknika na ny akstika.
Raha ny momba ny zavatra simika Isotretioin, dia ny isotretinoin no fotsy 13-cis-retinoic. Izy io dia tahaka ny mavo mavo sy menaka manjelanjelatra ary manana lanjan'ny molekiola 300.44. Misy ifandraisany amin'ny asidra retino sy retinol (vitamin A).
WNy hatsikana dia ny akne momba ny fitsaboana?
Angamba manontany tena ianao hoe inona ny aknetika. A akne acne Ny endriky ny akne izay vokatr'ireo fàkana manakona ny hoditra, mahatonga ny aretina sy ny fiterahana. Olona maro, eo ho eo amin'ny 80 isan-jaton'ireo antitra eo anelanelan'ny 11 sy 30 taona dia mijaly amin'ny akne, fa ny ampahany kely amin'izy ireo dia manana akne maitso, izay mafy kokoa noho ny akne mahazatra.
Ny cyne acne dia mazàna kokoa kokoa sy marefo kokoa noho ny fako ary tsy mety mandeha na dia aorian'ny fitsaboana anao aza. Ny alikaola dia mety hampijaly ary matetika miala ao ambadiky ny fery lalina.
Angamba mbola mitombo foana ny aknanao na dia eo aza ny ezaka maro ataonao mba hanafoanana azy. Tsy mila mikaroka ny fitovizan-teny mihanaka ianao. Ny dikany dia midika fotsiny hoe fitomboana haingana amin'ny zavatra iray, amin'ity tranga ity, akne. Noho izany, ny fiheveran-tena mitovy amin'izany dia ny fampitomboana, ny fielezana, na ny fiakarana.
Ankehitriny, izany ankoatra izany.
Raha toa ka efa nanandrana ny fomba fitsaboana hafa rehetra toy ny antibiôtika am-bohoka sy ny fanafody samihafa ianao amin'ny fomba fitsaboana maimaim-poana amin'ny cystic na cyne, dia mety ho ny vahaolana farany indrindra dia ny Isotretinoin. Ankoatr'izay dia azo ampiasaina koa ny zava-mahadomelina ho fitsaboana ny toe-pahasalamana hafa, arakaraka ny fanolorana dokotera.
Isotretinoin dia fanafody retinoid, vokatra avy amin'ny vitamin A. izay fantatra amin'ny anarany marika ihany koa:
Ankoatra izany, azo jerena amin'ny dikan-teny samihafa ny zava-mahadomelina.
Ahoana ny fiasan'ny Isotretinoin?
Ankoatr'izay dia ampiasain'i Isotretinoin, angamba manontany tena ianao hoe: "Ahoana no iarahan'i Accutane?" Fa nahoana no tena mahery izy io ka afaka manao ny antibiotika sasany sy ny fanafody an-doha?
Eny eto, misy fanazavana momba ny valin'ny fanontaniana hoe 'ahoana no iarahan'i Accutane?'
Toy izany koa ny fanafody retinoid hafa, Isotretinoin dia miasa amin'ny fanovana ny transkònan'ny ADN. Ny vokatr'izany fanovana izany dia ny fihenan'ny habetsahana sy ny famokarana dipoavatra.
Rehefa maka Isotretinoina ianao, dia mihena ny fihenam-bolo manimba ny hoditrao izay tompon'andraikitra amin'ny famokarana dipoavatra. Sebum dia vody voajanahary ary ny vokatra be loatra dia mety hitarika amin'ny fahasamihafan'ny hoditra maro toy ny akne.
Ny ranon-drivotra tafahoatra dia manasitrana ny ratra manjavozavo, ka manakana ny menaka amin'ny hoditra. Izany dia miteraka ny fametrahana ny menaka eo ambany hoditra. Ny bakteria izay miteraka aknika (akne vulgaris) dia mivoatra amin'ny toe-javatra toy ny sebum dia ny sakafony.
Rehefa mihinana akondro eo amin'ny hoditra ny akne vulgaris, dia mamokatra vokatra fako izy ireo ary asidra tavy. Ny aretin-tsaina sy ny asidra dia manelingelina ireo trondro madinidinika ary mahatonga azy ireo ho marefo. Mipoitra ihany koa ny tsipika hoditra.
Noho izany, rehefa mihenan'ny trondro ny gripa, dia mihena ny habetsahan'ny vokatra ambany. Vokatr'izany, dia mihena ny fihenan-taolana amin'ny ala. Raha ny fijerena ireo paompy, na ny akne, dia matetika no vokatry ny hoditra mihetsiketsika amin'ny ranomamy, ny fiantraikan'ny fanafody manara-maso azy ireo.
Izany dia misakana ny fanakanana ny ranon-drongony ary noho izany, dia tena mety ho an'ny bakteria ny mitombo ao anaty hoditra. Mampihena ny fery amin'ny hoditra koa ny zava-mahadomelina. Ankoatra izany, ny rongony dia mampihena ny tsy fahampian'ny sela izay nalaina tao anaty ranon-drongony. Izany dia mampihena ny fahafahany mamorona lohalika sy fotsy.
Rota Isotretinoin ho an'ny fitsaboana amin'ny akne
Isotretinoin 4759-48-2 Tsy isalasalana fa ny fitsaboana amin'ny ankapobeny indrindra, indrindra ho an'ireo tranga goavana izay nampiasana ny fampiasana antibiôtika sy ny fanafody famonoana fihinam-bidy. Zavatra iray mahagaga momba ny Isotretinoin ho fitsaboana ny akne dia ny mety ho azonao ampiasaina mandritra ny fotoana fohy fotsiny, angamba 16 hatramin'ny herinandro 20 mba hanao veloma ny fiononanao, na manao ahoana na manao ahoana ny fahasarotan'izy ireo.
Na izany aza dia mety hanome toro-lalana iray hafa momba ny fitsaboana toy izany ny mpitsabo anao, mba hahazoana alalana amin'ny akneo. Tsy toy ny ankamaroan'ny fanafody amin'ny aknao hafa izay mety ilainao hampiasaina tsy tapaka mandritra ny fotoana lava, na mandritra ny fotoana maharitra aza.
Na dia tsy fahita firy aza ny manangona valim-bolo raha vao vita amin'ny fitsaboana Isotretinoina ianao, dia mety hanoro hevitra anao ny mpitsabo amin'ny fikarakarana hoditrao mba handroso amin'ny fanafody fihinam-panafody ho an'ny fikojakojana ny hodinao vaovao.
Mandra-pahoviana no hahalalan'ny olona iray ny valiny momba ny Accutane?
Mety hahagaga anao izany raha tsy efa nandre momba azy io satria mifanohitra amin'ny zavatra andrasanao izany; Mety hiharatsy ny pimpanao rehefa manomboka mitondra Isotretinoina. Hey! Aza maika hiala!
Na izany aza dia hanomboka hahita ianao Valiny azo antoka ao anatin'ny 7 ka hatramin'ny 10 andro fitsaboana anao. Ny solosainao dia hanomboka tsikelikely ao anatin'ny vanim-potoana.
Amin'ny ankapobeny dia manomboka amin'ny 16 ka hatramin'ny herinandro 24 amin'ny fitsaboana ny fitsaboana feno na manakaiky tanteraka. Raha vantany vao vita ny fianarana, dia mety ho tsy misy akne maimaim-poana ianao mandritra ny fotoana maharitra.
Ny fiverimberenam-pitenenana dia tsy azo atao afa-tsy amin'ny toe-javatra izay ahitàna ny fiverimberenan'ny voambolana taorian'ny fitsaboana. Na dia izany aza, ny dingana famerenana indray dia tsy maintsy manomboka farafahakeliny 8 herinandro aorian'ny andro farany amin'ny dingana voalohany (voalohany). Izany dia satria ny akne dia mety hivoatra ao anatin'io vanim-potoana io taorian'ny dingana voalohany.
Ahoana ny fampiasana Isotretinoin
Ny Accutane (Isotretinoin) dia misy amin'ny 10-mg, 20-mg, ary koa ny kapila bitma 40-mg. Ny singa hita ao anatin'ny kapsilan'ity zava-mahadomelina ity dia ahitana ny bakteria, ny hydroxyanisole butylated, ny menaka soja, ny sira sy dipoavatra, ny menaka misy voanio hydroogène ary ny menaka soja soja.
Ny isotretinoin 10mg, isotretinoin 20mg ary capotile isotretinoin 40mg dia manana rafitra loko samihafa. Ny isotretinoin 10mg dia manondro oxidom (red) sy dioxide titan, 20mg dia manana FD & C Red No. 3, FD sy C Blue No. 1, ary dioxide titana raha 40mg dia manana FD & C Yellow No. 6, D & C Yellow No. 10, ary dioxide dite rafitra.
Amin'ny teny layman isotretinoin 10mg dia tonga amin'ny loko mavomavo manga, 20 mg amin'ny maroon, raha 40 mg kosa mavo.
Isotretinoin dosage dia miavaka amin'ny marary isan-karazany. Noho izany dia zava-dehibe ny hanarahanao ny fampitandreman'ny dokotera ny torolàlana ampiasaina amin'ny fampiasana azy.
Ny fitsipiky ny ankihibe dia miankina amin'ny lanjan'ny vatanao ny dosage isotretinoin voalohany, ilay olana ara-pahasalamanao izay ampiasainao ny zava-mahadomelina sy ny tanjaky ny fanafody.
Ho an'ny olon-dehibe sy ankizy izay fara-fahakeliny 12 taona, dia ny dosage isan'andro isan'andro dia 0.5 ka hatramin'ny 1 milligram (mg) isaky ny kilao (kg) amin'ny lanjan'ny vatana. Na inona na inona ny dokotera soso-kevitra amin'ny dokotera, dia tokony hohanina miaraka amin'ny sakafo isaky ny mandeha.
Ny dosis Isotretinoin dia raisina ho dosie roa isaky ny marary ary ny marary iray mahay dia tokony handray izany amin'ny 15 hatramin'ny herinandro 20. Ho an'ireo ankizy izay mbola kely noho ny 12 taona, dia tsy maintsy ampidirin'ny dokotera ny dosage aminy.
Raha ny dokotera no mandefa anao 0.5 mg / kg / andro isotretinoin dose, tsy voatery midika izany fa hampiasa izany dosie ianao mandritra ny fitsaboana. Miankina amin'ny valin-kafatrao amin'ny zava-mahadomelina, indrindra raha ny fanesorana ny akne systika ary ny endriky ny voka-bary hafa, dia afaka manitsy ny doka ny dokotera.
Ireto ny dosage Isotretinoin 4759-48-2 araka ny lanjan'ny vatana
Total mg / andro
Mp kilao 0.5 mg isaky ny kilao 1 mg isaky ny kilao 2 mg isaky ny kg *
Na dia izany aza dia misy ny fisehoana manokana eo amin'ny famaritana ny doka. Ny olon-dehibe manana aknika henjana mafy dia miteraka fampihorohoroana na fihenam-bidy amin'ny ankapobeny amin'ny ankapobeny dia mety mila fanitsiana amin'ny 2.0 mg / kg / andro farafaharatsiny, arakaraka ny fandeferany amin'ny myorisan (Isotretinion).
Tokony atao amin'ny sakafo ny akotane (isotretinoin). Azonao atao ny mandray ny doka rehetra avy hatrany rehefa avy misakafo na misakafo mba hiantohana ny fahombiazan'ny fitsaboana.
Ny tsy fisian'ny fanafody amin'ny sakafo dia hampihena be ny otrik'aretina. Noho izany, alohan'ny hametrahan'ny dokotera ny doka ho ambony mba hampitomboana ny fahombiazan'ny zava-mahadomelina dia hohadihadiana momba ny fanarahanao ny torolàlana momba ny sakafo.
Ary koa, tokony hitelina ny kaponta Accutane manontolo tsy mitsatoka, manapaka, maka na mametaka azy. Ankoatr'izay dia tokony hitelina azy amin'ny rano fisotro madio ianao.
Misy fitsaboana Isotretinion iray izay efa voaporofo fa nahatonga ny famerenana amin'ny akia manontolo sy maharitra. Na izany aza, araka ny voalaza tetsy aloha, raha ny mpitsabo nify anao no mahita fa ilaina ny fananana fitsaboana faharoa, dia tokony hanomboka amin'ny herinandro fahavalo aorian'ny andro farany ny fianarana voalohany.
Ao anatinà fanadihadiana iray mba handinihana ny fahombiazan'ny isotretinoin dosages, dia najoro fa izy rehetra dia nanolotra ny fanesorana voalohany ny akne. Na izany aza, dia hita fa azo antoka kokoa ny fiverimberenana amin'ny dosage ambany.
Inona no tokony hialana rehefa mandray isotretinoina
Mahazo vohoka rehefa mandray ilay fanafody ary ao anatin'ny iray volana aorian'ny fiafaran'ny fitsaboana.
Ny fampinonoana mandritra ny fitsaboana ary ao anatin'ny iray volana aorian'ny fianarana. Voamarina fa afaka mandalo ny ronono ny zava-mahadomelina ary mety hanimba ny zanakao fa tsy misy porofo ara-tsiansa hanamafisana ilay ahiahy.
Mandray rà izy rehefa mandray ilay fanafody ary ao anatin'ny iray volana aorian'ny fiafaran'ny fitsaboana. Raha misy vehivavy bevohoka mahazo ny ranao nomena anao, mety ho atahorana ny vokatry ny fanafody ny zanany.
Maka fanafody hafa na vokatra momba ny fôsily misy Accutane (isotretinoin) raha tsy efa manana fankatoavana ny dokotera ianao.
Ny fiara amin'ny alina raha toa ka misy fiantraikany amin'ny maso ny Accutane (isotretinoin).
Manaraka fomba fitsaboana kosmetika ho an'ny fahasimban'ny hoditra, rehefa mandray ny Accutane ary enim-bolana aorian'ny fitsaboana. Ny fomba fitsaboana dia ny fampiroboroboana, ny dermabrasion ary ny lasers. Ny fanafody dia mety hampahalemy kokoa anao amin'ny fikolokoloana avy amin'ireo fomba ireo.
Manana tara-pahazavana mivantana sy hazavana amin'ny taratra ultraviolet. Ny fanafody dia afaka mampitombo ny fahatsapana ny hoditra amin'ireo jiro ireo.
Mizara ny zava-mahadomelina amin'ny olon-kafa. Araka ny voalaza terỳ aloha, tokony horaisina amin'ny dokotera dokotera ny zava-mahadomelina.
Ny dossier diso (isotretinoin) diso
Raha sendra tsy mitandrina ny dômaninao ianao, dia tokony haka izany raha vao azonao atao. Na izany aza, tsaroanao ny momba izany raha toa ka efa ho ny fotoana ho an'ny dôsipanao manaraka, dia aza manadino ny doka tsy voavaly ary avereno indray ny fandaharam-potoana ara-pahasalamanao. Raiso ny dosie manaraka amin'ny fotoana mahamety izany. Aza mandray dosie roa amin'ny fotoana iray na mifanakaiky loatra.
Fepetra manokana hisorohana
Noho ny mety ho fiantraikan'ny fahasamihafana amin'ny Accutane (isotretinoin), ny fivarotana ny zava-mahadomelina dia natao amin'ny alàlan'ny programa famelabelarana voafetra manokana antsoina hoe iPLEDGE ™. Ny fandaharanasa dia ankatoavin'ny Fitantanana ny sakafo sy ny fitsaboana.
Ny presbyteran'ny fanafody dia tsy maintsy voasoratra anarana sy mavitrika miaraka amin'ity programa ity - iPLEDGE. Ankoatr'izay, ny zava-mahadomelina dia ho an'ny marary izay nosoratana tamin'ny fandaharam-potoana ary nohazavaina fa nahafeno tanteraka ny fepetra takian'ny fandaharana.
Noho izany, inona ny momba ny programan'ny iPledge?
Ny tanjona lehibe indrindra amin'ny programan'ny iPledge dia ny hahazoana antoka fa ny olona mahafeno fepetra ihany no mandray ny fanafody ary ny vokatra hafa dia azo atao faran'izay haingana araka ny azo atao amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso ny fitsaboana sy ny fitandremana henjana ny fepetra fisorohana. Ny zavatra tafiditra ao amin'ny fandaharam-potoana dia ahitana fitsapana isam-bolana sy fanaraha-maso ny fiterahana. Miresaha amin'ny dokotera mba hahafantatra bebe kokoa momba ilay fandaharana.
Ny fitsaboana ny zaza
Ny marary vehivavy marary izay mety bevohoka dia tokony handalo fitsapana roa na sera amin'ny fitiliana seranana miaraka amin'ny fahatsapana kely indrindra amin'ny 25 mIU / mL. Ny vokatry ny fitsapana azy roa dia tsy maintsy manimba azy ireo mba handraisana ny taratasiny Accutane (isotretinoin) voalohany.
Ny fanandramana voalohany dia nahazo ny Accutane (isotretinoin) manokan-tena manokana amin'ny fametrahana fa ny acne dia mahafeno ny fitsaboana Accutane. Ny fanandramana faharoa dia natao voalohany mba hanamafisana ny vokatry ny fitsapana voalohany. Tokony atao amin'ny laboratoara miaraka amin'ny mari-pahaizana CLIA. Ny fe-potoana eo anelanelan'ny fitsapana roa dia tsy tokony ho latsaky ny 19 andro.
Raha toa ka marary an-jatony ianao, dia tsy maintsy atao ny fitsapana faharoa momba ny fitondrana vohoka mandritra ny dimy andro voalohany amin'ny vanim-potoanan'ny taom-piasana izay mialoha ny mety hanombohan'ny fitsaboana Accutane (isotretinoin). Ankoatr'izay, tokony atao ny fitsapana rehefa nampiasa karazana fampifandrosoana roa ianao nandritra ny andro 30.
Raha tsy ara-dalàna ny vanim-potoan-taonan'ny reny, na eo amin'ny rafitra fanabeazana aizana izay manakana ny fialana amin'ny fakana aina, ny fitsapana faharoa dia tokony atao mandritra ny vanim-potoana izay mialoha ny fanombohan'ny fitsaboana Accutane (isotretinoin). Tahaka ny amin'ny vehivavy misy tsiranoka ara-dalàna tsy tapaka dia tokony hatao ihany koa ity fitsapana ity rehefa avy nampiasa karazana fampifandraisan-jiro roa ianao nandritra ny andro 30.
Mila mahatakatra sy manaraka tanteraka ny fepetra takian'ny programan'ny iPledge ianao. Raha tsy izany dia tsy ho azonao atao ny mahazo ny fanafody na ny dokotera hafa momba ny fanafody.
Nahita izahay fa maro ny marika isotretinoin. Zavatra iray hafa tokony ho fantatrao fa ny marika isotretinoin samihafa dia miasa amin'ny fomba hafa. Amin'ny maha-toy izany, ny capsules amin'ny marika sasany amin'ny zava-mahadomelina dia tsy tokony hosoloina amin'ny endrika isotretinoina hafa.
Ohatra, tokony tsy hisolo toerana ny caputules Accutane amin'ny capsules Absorica ianao. Noho izany, raha toa ianao ka mameno ny isotretinoin (Accutane) ary hitanao fa toa tsy mitovy amin'ny voalohany, dia tadiavo ny fanazavana avy amin'ny mpanamboatra anao.
Inona avy ireo fiantraikany ny Accutane
Angamba amin'izao fotoana izao dia manontany tena ianao hoe, "no azo antoka?"Tsara; Ao anatin'izany ny fitsaboana zava-mahadomelina dia fitsaboana mahomby amin'ny akne, toy ny fanafody, mety miteraka vokatra hafa izany. Saingy tsy misy zavatra mampanahy ny momba ny fiantraikan'ny Isotretinoin, indrindra raha manaraka ny baiko omena ny taratasy ianao ary mitandrina mafy ny fepetra.
Hahita bebe kokoa momba ny fitandremana (ny dos sy ny don'ts) eto isika eto.
Zavatra iray hafa izay tokony hotadidinao ao an-tsaina ny vokatry ny Accutane fa tsy ny olona rehetra mandray ny fanafody no mitantara azy ireo (ny vokatra tsy mitongilana). Ankoatra izany, ny vokatra tsy voavonjy dia miala rehefa tsy maka ny fanafody ianao.
Na dia misy akony hafa mampiavaka ny Accutane aza, dia tsy dia fahita firy loatra. Andao hojerentsika voalohany ny fiantraikan'ny komity Accutane.
Ny voka-dratsin'ny Isotretinoin
Ny voan'ny tsindrin'ny Isotretinoin dia:
Ny fahamainana amin'ny hoditra, mamafa sy mangatsiaka
Ny hoditra manala ny hoditra, indrindra eo amin'ny palmie sy saha
Ny aretin-tsinay sy ny orona ary ny maso
Herisetra (reraka mahery
Mena, voakaoka ary malemy
Tsy dia mahazatra ny fiantraikan'ny Accutane
Na dia mety hitranga aza ny vokatra manaraka dia tsy dia mahazatra loatra ny fisehoany. Raha ny marina, ny kely indrindra amin'ny 0.001% amin'ny olona mandray ny zava-mahadomelina dia mahatsapa ireo vokatra lehibe ireo. Ireto misy fiantraikany:
Ny taolam-paty sy ny tendany
Ny akorany sy ny fanaintainan'ny abdominal
Ny fijaliana na ny fahasarotana rehefa mitelina zavatra
Ny hoditra maina sy ny molotra dia tena mahazatra. Ho an'ny fiarovana, dia tsy misy fanafody, dibebaka, na lasera hoditra raha raisinao isotretinoin amin'ny akne ary fara fahakeliny 6 volana aorian'ny fitsaharanao, satria mety miteraka ratra na hoditra manify izany.
Maro ny olona manontany hoe: "Azo antoka ve ny fiarovana ny vehivavy bevohoka?" Ny valiny dia TSY; Tsy misy azo antoka ho an'ny vehivavy bevohoka.
Ny vehivavy bevohoka dia kivy mafy amin'ny fampiasana ny Accutane ho an'ny fitsaboana amin'ny aknaka na fitsaboana amin'ny cystika na amin'ny tanjona na inona na inona. Ary koa, ireo vehivavy izay mety bevohoka mandritra ny fitsaboana Roaccutane dia tsy tokony hampiasa ny zava-mahadomelina.
Ny anton'io fampitandremana io dia satria ny fiantraikan 'ny hetsika Isotretinoin ny fihetsika, na inona na inona ny dosage Isotretinoin, dia mety hisy fiantraikany amin'ny foetus, ka miteraka fahavoazana. Ny sasany amin'ireo taova / ampahany amin'ny foetus izay mety ho voan'ny aretina dia ahitana ny tarehy, ny atidoha, ny sofin'ny fo, ny maso ary ny tosi-drà sy ny tongotra.
Ary koa, misy vehivavy bevohoka mandray io fanafody io dia mety hampidi-doza tampoka na vao teraka vao teraka.
Raha misy vehivavy mandray ny Accutane (Isotretinoin) dia mitazam-potsiny (mikarakara bevohoka), dia tokony hiala amin'ny fampiasana ny rongony avy hatrany izy ary mitsidika mpitsabo mpanimba ny toetr'andro, izay niaina tambatsela-ponenana.
Na dia tsy misy ny fomba marina ahafahan'ny manam-pahaizana mametraka raha toa ka misy fiantraikany amin'ny fanatanterahana ny mety hisian'ny tsy fahampian'ny zaza ny zaza ao am-bohoka. Ankoatra izany, ny reny dia hahazo torohevitra mba hahafahany miatrika ny fanahiana sy ny mety ho vokatra ratsy mety hitranga.
Does Isotretinoin koa miteraka fahaketrahana?
Ny fahaketrahana dia ny fiantraikany indrindra amin'ny Isotretinoin. Misy tatitra sasany milaza fa ny olona sasany dia mahazo fahaketrahana ketraka. Na izany aza, tsy misy porofo ara-tsiansa mifandray amin'ny roaccutane amin'ny famonoan-tena.
Tsy misy olona afaka manazava tanteraka ny fomba mety hampihena ny fahaketrahana. Na izany aza dia mino ny mpahay siansa sasany fa mety hanakorontana ny famokarana serotoninina sy ny fomba ampiasain'ny vatana ny fanafody.
Angamba izany dia mampatahotra fa tsy misy antony hanairana. Antony? Ny ankamaroan'ny olona mampiasa Isotretinoin dia niaina olana ara-tsaina. Raha ny marina, tsy misy porofo mazava mifandray amin'ny fampiasana Isotretinoina amin'ny fahaketrahana. Mbola tsara kokoa; Ny fianarana sasantsasany dia nanipy fisalasalana mikasika ny fifandraisana mety misy eo amin'ny roa.
Na izany aza, amin'ny fepetra fisorohana, raha toa ianao ka manana ny fahaketraky ny fahaketrahana na karazana aretina ara-tsaina hafa, dia ataovy izay hahatonga anao hisarika ny sain'ny manam-pahaizana momba ny fahasalamanao alohan'ny hanombohanao ny Isotretinoin. Ankoatra izany, raha toa ka mampitombo ny fahatsapana fahaketrahana dia manana eritreritra na famonoan-tena amin'ny fakana ny Isotretinoin; Aza misalasala hamela ny mpitsidika momba ny fahasalamana hahafantatra izany.
Ny fomba hiatrehana ny voka-dratsin'ny Accutane
Misy ny zavatra azonao atao mba hijerena ireo fiantraikan'ny tsindrona Isotretinoin:
Ny fiantraikan'ny Isotretinoin Ahoana no iatrehana izany?
hoditra na hoditra Mampihinana ny famonoana (alaina maimaim-poana tsy misy menaka amin'ny hoditra) ary molotra molotra eo amin'ny molotrao
Ampiheno ny fotoana fandroanao ho an'ny minitra 2 ary ampiasao rano mangatsiaka fa tsy mafana
Ampitomboina ny fahatsapana ny hoditra Mialà amin'ny masoandro mamirapiratra ary ampiharo fepetra avo lenta, maimaim-poana ny solika eo amin'ny hoditrao na dia be rahona aza. Aza mampiasa masoandro na masoandro
Hena maina Mangataha manam-pahaizana manokana momba ny maso mba hamporisika anao hijery kely. Raha toa ka manao lens-tifitra ianao ary mahatsiaro ho tsy mahazo aina raha mandray Isotretinoin, azonao atao ny manolo azy ireo amin'ny solomaso mandritra ny fotoana handraisanao ny fanafody.
Ny vavany / tenda Ny tsiranoka siramamy na sotro.
Mangataha ny mpanamboatra anao mba hanoro anao ny fanafody maharary fanaintainana.
Aza mampiasa fanazaran-tena mahery vaika satria mety hiharatsy ny fanaintainana
Azo ampiasaina ve ny Isotretinoin?
Ny valiny raha azo ampiasaina tsara ny Isotretinoin dia eny eny na tsia. Miankina amin'ny olona iray izany.
Voalohany, araka ny voalaza tetsy aloha, dia misy fepetra manokana (ohatra, vehivavy bevohoka na ireo izay mety hitebiteby) izay mahatonga ny olona sasany tsy mety hampiasa zava-mahadomelina. Raha manana ireo fepetra ireo ianao, dia tsy ho azo antoka ny fampiasanao Isotretinoin
Ankoatr'izay, Isotretinoin dia natao fotsiny ho an'ny olona manana aknesa akne / naotokely mafy na fihenam-bidy miverimberina na vatana izay tsy hazava mihitsy na dia aorian'ny fitsaboana retinol amin'ny akne na fitsaboana hafa ho an'ny akne. Raha toa ka mora ny aknao, dia mety hanolotra tsiranoka hafa amin'ny vitamin A ianao na amin'ny fitsaboana hafa amin'ny fitsaboana amin'ny akne.
Ahoana no hividianana Accutane (isotretinoin) an-tserasera
Raha toa ny mpamokatra, ny marary na ny pharmacist, dia efa nahafeno ny fepetra rehetra ilaina amin'ny programan'ny iPledge ary mila mividy isotretinoin, azonao atao fotsiny ny mahazo izany tsy misy aterineto. Na izany aza, tadidio fa misy fananahana raha ny momba ny fivarotana zava-mahadomelina ity; Tokony hamidy ihany koa ny mpamatsy sy ny mpampiofana iPledge.
Mba hahafahanao zaraina ara-dalàna amin'ny fivarotana isotretinoina, tokony hifandray voalohany amin'ny iPLEDGE ianao ary manaiky koa ny hanatanteraka ny fepetra mifanentana amin'ny programa isotretinoin.
Raha jerena ireo fepetra takiana, aasraw.com dia ny tsara indrindra, tsara indrindra ary toerana ahafahanao mividy isotretinoin mora. Isika dia mivarotra kapotsaka azo avy amin'ny isotretinoin sy isotretinoin amin'ny mpivarotra sy pharmacista amin'ny vidin'ny fifaninanana.
Ahoana no tokony hitahiranao Accutane (isotretinoin)?
Ny Accutane (isotretinoin) dia tokony ho voatahiry ao anaty vilia voajanahary amin'ny hafanan'ny efitra (59 ° ka hatramin'ny 86 ° F, 15 ° ka hatramin'ny 30 ° C). Ny toerana izay andrasanao io zava-mahadomelina io dia tokony ho hafanana sy hazavana mivantana ary tokony ho maimaim-poana. Ankoatr'izany, tsy tokony hikorontana ny zava-mahadomelina ary tokony hajanona amin'ny fahazoana ankizy.
Aza mitandrina an'io zava-mahadomelina io raha tsy ilaina intsony izany na efa ela. Na izany aza, aza mamela ny fampiasana ny fomba rehetra; Miangavy ny mpitsabo manam-pahaizana momba ny fahasalamana ho an'ny toro-lalana tokony hatao
Andeha hojerentsika ny fanamarihana Isotretinion sasany avy amin'ny olona sasany izay nampiasa ny fanafody.
Hannah White: "Tsy afaka ny ho tony! Farany, vitako ny mahazo endrika maimaimpoana maimaim-poana izay naniriko nandritra ny taona maro. Hatramin'ny naha tanora ahy 12 taona lasa izay, dia niady tamin'ny akne mafy aho. Very ny fiheverako ny tenako ho vokatr'izany.
Nanandrana ny ankamaroan'ny vokatra manohitra ny akne aho nefa tsy nisy nanampy azy ireo nesorina ireo solomaso. Tamin'ny taon-dasa, nisy namana iray nanoro hevitra ahy hanandrana ny Isotretinoin izay nataoko. Nahavita ny fitsaboana aho roa volana lasa izay ary faly aho amin'ny vokatra. Nanaisotra ny akniko ary mihalalina koa ireo teboka mainty. Tena te-hizara an'ity zava-mahadomelina ity amin'ny olona iray aho. "
Kelly: Tsy afaka misaotra ny olona izay niaraka tamin'ny isotretinoin noho ny akne. Raha ny zava-mahadomelina dia tsy maintsy mifandray amin'ny akne mafy. Manoro hevitra ny olona any aho izay saika handao ny fanafody azo avy amin'ny fanafody fitsaboana mahazatra hitsidika ny dokotera ary hahalalako raha mety ny hampiasa azy Isotretinoin (Accutane). Io fanafody io dia tena mahagaga; Azoko antoka fa marina izany.
Juliana: "Na dia saron-tanana sy tongotra aza ny isotretinoin, dia nahazo tombony lehibe ho an'ny volako aho. Raha ny marina dia mahatsapa aho fa mihoatra noho ny vola azoko. Azoko antoka fa raha mampiasa fanafody mahazatra hatrany aho, dia efa nandany vola be aho, nefa tsy nahazo ny vokatra tadiavina. Manolo-tena mafy aho Accutane ho an'ny akne izay namono zavatra hafa tamin'ny vitamin A ho an'ny akne. "
Emily Hanson: "Wow! Tsy afaka ny ho sambatra kokoa amin'ny rafitra isotretinoin ny hetsika sy ny vokatra. Taorian'ny famakiana marobe isotretinoin, dia nanapa-kevitra ny hitsidika mpivaro-tena iray aho mba hametraka raha mety ho ahy ny zava-mahadomelina.
Rehefa nahita ny rakitra fitsaboana nataoko izy dia nanamafy fa ny akne dia azo ampiasaina amin'ny fampiasana isotretinoin satria mafy dia mafy ary nitohy nandritra ny fotoana lava na dia teo aza ny fitsaboana isan-karazany. Nanomboka nihatsara ny tarehiko nandritra ny herinandro voalohany tamin'ny herinandro 10 momba ny fitsaboana ary tamin'ny herinandro 20, dia nazava tanteraka ny akne. "
Billy Harts: Izaho dia nahazo fahazoan-dàlana ary apetraka ho an'ny pharmacist iPledge miaraka amin'ny zava-mahadomelina any Illinois. Nanomboka nivarotra isotretinoin efa ho herintaona lasa aho ary zazalahy ...! Ity fivarotana zava-mahadomelina ity dia mivarotra toy ny mofo kafe. Na dia amin'ny takian'ny iPledge aza, dia mankalaza izany ny marary. Te-hisaotra ny aasraw.com aho mba hitondra azy akaiky kokoa.
Salome Williams: "Aza mieritreritra ny hitrandrahana isotretinoin; Ity zava-mahadomelina ity no tena zava-dehibe amin'ny fitsaboana amin'ny akia. Efa telo taona izay no nahavitako ny fitsaboana isotretinoin ary tsy nahafaly ahy ny vokatra. Nanjavona ny akniko ary afaka mivoatra miaraka amin'ny fahatokisan-tena aho ankehitriny. "
Charlene B: Ny fahombiazan'io fanafody io amin'ny ady amin'ny akne mafy dia tsy maharesy. Efa nanandrana fanafody ampiana fanafody aho ary io dia isotretinoin izay nahavita nanafaka ahy tamin'ny lozabe. Tena mankasitraka an'io zava-mahadomelina io aho.
Ny Isotretinoin dia tsy isalasalana fa ny fitsaboana amin'ny fomba mahomby indrindra. Raha sendra aretina mafy ianao na marary iray miaraka amin'ny fitsaboana maizimaizina tsy dia mazava loatra na dia efa nahazatra aza ny fanafody fanafody hafa, dia azo inoana fa mety ho fomba fitsaboana azo tsaboina tsara ny zava-mahadomelina. Na izany aza, ny torohevitry ny dokotera dia tena manan-danja alohan'ny hanombohana ny fitsaboana an'io fanafody io. Ankoatra izany, ny marary sy ny mpivarotra zava-mahadomelina dia tsy maintsy miantoka fa mifanaraka amin'ny fepetra mifanaraka amin'ny fikarakarana ny fanafody.
Wysowski, Diane K., Joslyn Swann, ary Amarilys Vega. "Fampiasana isotretinoin (Accutane) any Etazonia: fampitomboana haingana avy amin'ny 1992 amin'ny 2000." Journal of American Academy of Dermatology4 (2002): 505-509.
Williams, HC, Dellavalle, RP, & Garner, S. (2012). Akne vulgaris. The Lancet, 379(9813), 361-372.
Feldman, S., Careccia, RE, Barham, KL, & Hancox, J. (2004). Diagnosis and treatment of acne. American Family Physician, 69(9), 2123-2138.
Barak, Y., Wohl, Y., Greenberg, Y., Dayan, YB, Friedman, T., Shoval, G., & Knobler, HY (2005). Psychosis mahomby manaraka Arautane (isotretinoin) fitsaboana. International psychopharmacology klinika, 20(1), 39-41.
Stern, RS, Rosa, F., & Baum, C. (1984). Isotretinoina sy bevohoka. Journal of American Academy of Dermatology, 10(5), 851-854.
Barnes, CJ, Eichenfield, LF, Lee, J., & Cunningham, BB (2005). Fomba mahazatra amin'ny fampiasana orita isotretinoina ho an'ny akne infantile. Fitaovam-pitaizana zaza kamboty, 22(2), 166-169.
Kilcoyne, RF, Cope, R., Cunningham, W., Nardella, FA, Denman, S., Franz, TJ, & Hanifin, J. (1986). Ny hyperostosis ara-pahasalamana ambany indrindra amin'ny fitsaboana isotretinoine ambany. Radiolojika mpanadihady, 21(1), 41-44.
Rojo Proviron (Mesterolone) amin'ny fambolena, fanafody, ary fitsaboana Ny zavatra rehetra momba ny Trenbolone Enanthate Powder